Guddoomiyaha deegaanka Qurac-joome oo sheegay inay ku talaabsadeen horumar amni – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha deegaanka Qurac-joome oo sheegay inay ku talaabsadeen horumar amni
Guddoomiyaha Deegaanka Qurac-Joome ee ka tirsan gobalka Bakool Cabdifataax Maxamed Cabaade ayaa sheegay in deegaanka uu horumar ku tallaabsaday, isla markaana ay ku guuleysteen xaqiijinta amniga.
Guddomiyaha oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada amniga ay suurta geliyeen xaqiijinta amniga, waxaana uu intaa ku daray in ciidamada ay markasta joogteeyaan howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab.
Cabdifataax Maxamed Cabaade ayaa sheegay in adeegyada bulshada ee deegaanka uu yahay mid horumar la tabaan karo ay ka jiraan, isla markaana ay dib u soo laabteen adeegyadii bulshada, waxaana uu intaa ku daray in adeegyada caafimaadka ay gabaabsi tahay, maadaama aysan jirin xarun caafimaad oo dadka loogu adeego.
Guddoomiyaha Deegaanka Qurac-Joome ayaa ka codsaday qurbo joogta iyo hay’adaha samafalka qaabilsan inay gurmad deg deg ah la soo gaaraan bulshada degmada, waxaana uu intaa raaciyay in nabadgelyada degmada ay tahay mid la isku haleyn karo.
Deegaanka Qurac-Joome ee ka tirsan gobolka Bakool ayaa ka mid ah deegaannadii laga xoreeyay maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana dib u soo laabtay qeybo ka mid ah adeegyada guud ee bulshada.
Wasaaradaha Arimaha Gudaha ee dalka oo codsi diiran usoo dirtay guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed.
Warsaxaafadeed : Wasaaradda Arrimaha Dibadda waa in ay si dhaw ula socotaa Xaaladda Dhalinyaradda Soomaaliyeed ee ku xiran india, Seychelles